Tantara momba ny traikefa Apollo 1
Ny afo Apollo 1
Ny lozam-pifamoivoizana voalohany tany Amerika
Ny fipoakan'ny habakabaka dia mety mijery mora foana rehefa mitsonitika ny fantsom-pokonolona ireo rockets, fa ny hery rehetra dia tonga amin'ny vidiny. Fotoana fohy talohan'ny fanombohana dia ny fampiofanana sy ny fampiendrehana astronaut. Na dia misy hatrany aza ny mety hampidi-doza ny fanombohana, ny fiofanana an-tanindrazana ihany koa dia misy risika maromaro. Nitranga ny loza, ary tamin'ny raharahan'ny NASA, niatrika loza i Etazonia tamin'ny fiandohan'ny hazakazaka ho an'ny Moon.
Raha nanao dia nanao vivery ny ainy nandritra ny fampiofanana sidina ny mpanamory sambondanitra sy ny mpanamory fiaramanidina, dia nampihetsi-po ny firenena tao an-kibon-dreniny ny fahaverezan-drivotra voalohany tamin'ny loza. Ny fatiantoka ny Apollo 1 sy ny ekipany telo lahy tamin'ny 27 Janoary 1967, dia fampahatsiahivana mafy ny loza atrehin'ny mpanamory sambon-danitra rehefa mianatra ny fomba iasany amin'ny sehatra.
Ny zava-doza Apollo 1 dia nitranga noho ny ekipa Apollo / Saturn 204 (izay no nanamarina azy nandritra ny fisedrana tany an-tanety) dia nampihatra ilay fiaramanidina Apollo voalohany izay hitondra azy ireo any an-habakabaka. Ny Apollo 1 dia nofaranana ho iraka iraisam-pifamoivoizana ary ny daty fanesorana dia nokasaina hatao ny 21 febroary 1967. Ireo mpanamory sambon-danitra dia nandalo fitsapana iray antsoina hoe "fitsapana fialana". Ny baikon'ny baikon'ny baikony dia napetraka tao amin'ny onjam-peo Saturn 1B teo am-pelatanan'ny fiaramanidina toy ny tamin'ny fotoana nanombohana azy. Na dia izany aza dia tsy nisy nilana ny fiaramanidina. Ny fitsapana dia simulation mitaingina ny ekipa amin'ny alalan'ny fizarana manontolo amin'ny countdown nanomboka tamin'ny fotoana niditra ny kapsule mandra-pahatongan'ny fotoana hanombohana azy.
Toa tsy dia mazava loatra izany, tsy mampidi-doza ho an'ny mpanamory sambon-danitra. Nifanaraka sy vonona handeha izy ireo.
Ny fampiharana ao amin'ny kapsule dia ny ekipa tena izy nomanina hatao amin'ny volana febroary. Tao anatin'izany dia i Virgil I. "Gus" Grissom (Amerikana mpanamory baolina kitra amerikanina faharoa), Edward H. White II , (ilay Amerikana mpanandro voalohany Amerikana "handeha" any an-habakabaka) ary Roger B.
Chaffee, ("rookie" mpanamory baolina kitra ao amin'ny sehatra iraisam-pirenena). Lehilahy voaofana be izy ireo ary vonona ny hamita ity dingana manaraka ity hanomanana ny tetikasa.
Taorian'ny sakafo antoandro, dia niditra tao amin'ny kapsil ny ekipa mba hanomboka ny fitsapana. Nisy olana madinika hatrany am-piandohana ary farany, ny fahombiazan'ny fifandraisana dia nahatonga ny fitanana hapetraka eo amin'ny isa amin'ny 5:40 hariva
Tamin'ny 6:31 hariva ny feo (angamba i Roger Chaffee) dia nihiaka hoe, "afo, mahatsiaro tena aho." Roa herinandro taty aoriana, ny feon'i Ed White dia tonga teo amin'ny faritra, "Fire ao amin'ny lakandrano." Voasintona be ny fandraketam-peo farany. "Miady amin'ny lozabe ratsy ry zareo - aleo mivoaka ny varavarankely.", Na hoe: "Misy afo mivaivay, avelao hivoaka izahay." Mirehitra izahay ", na dia nilaza aho fa misy afo mirehitra. Mivoaka aho. "Niafara tamin'ny alahelon'ny fanaintainana ny fifindrana. Tao anatin'ny segondra vitsy monja, dia novonoina ireo mpanamory sambondanitra.
Niparitaka haingana be ny lelafo. Io fifindrana farany io dia nifarana 17 segondra taorian'ny nanombohan'ny afo. Vetivety taorian'izay dia nisy ny fanazavana telemanina rehetra. Nalefa haingana ny fanampiana vonjy taitra.
Ny fanandramana ny hahatongavana amin'ireo mpanamory sambon-danitra dia voavolavola olana maro. Voalohany, nakatona ny valindrihana kapoila tamin'ny clamps izay nitaky ny fanarenana tanteraka ny famotsorana azy.
Ao anatin'ny toe-javatra faran'izay tsara, afaka segondra 90 segondra fara fahakeliny ny hanokafana azy ireo. Hatramin'ny fanokafana ny atody anatiny dia tsy maintsy natolotra ny tsindry alohan'ny hamoahana azy. Efa ho dimy minitra taorian'ny fanombohan'ny afo no nidiran'ny mpamonjy voina tao an-trano. Tamin'ity indray mitoraka ity, ny atmosfera-be mpanankarena, izay nampidirina tao anaty kitapo, dia nahatonga ny afo hiparitaka haingana.
Ny ekipa dia mety ho lany tamingana ao anatin'ireo 30 segondra vitsy taorian'ny fifohana rivotra na ny afo. Tsy nisy nilana ny ezaka fampihavanana.
Nisy toby iray napetraka teo amin'ny programa Apollo manontolo raha namotopototra ny antony nahatonga ny loza ny mpanao fanadihadiana. Na dia tsy voafaritra mazava aza ny teboka manokana ho an'ny afo, ny tatitra farany momba ny filan-kevitry ny famotorana dia nanome tsiny ny afo amin'ny fiakaran'ny herinaratra eo amin'ireo lavaka mihantona ao an-trano.
Vao mainka niharatsy ny fitaovana hafahafa be tao amin'ny kapsule sy ny atmosfera natanjaka be. Raha lazaina amin'ny teny hafa, dia fitaovana iray ho an'ny afo haingana izay tsy afaka handositra ireo mpanamory sambon-danitra.
Ho an'ny asa fitoriana amin'ny ho avy, dia nosoloina fitaovam-panafody ny ankamaroan'ny fitaovana kabine. Ny oksizenina madio dia nosoloina akangom-oksizenina azota tamin'ny fanombohana. Farany dia navaozina haingana ny valiny ary afaka nesorina haingana.
Ny iraka manaraka ny Apollo / Saturn 204 dia nomena anarana hoe "Apollo 1" ho fanomezam-boninahitra an'i Grissom, White, ary Chaffee. Ny fanombohana Saturn V voalohany (tsy voafehy) tamin'ny Novambra 1967 dia voatendry ho Apollo 4 (tsy misy iraka nomena anarana Apollo 2 na 3).
Navoaka ary novolavolain'i Carolyn Collins Petersen.
Ny endriky ny Masoandro, ny Volana ary ny Planeta dia miseho amin'ny Astronomia tranainy Maya
Ny dikan'ny Maggie ao amin'ny 'Recitatif' an'i Toni Morrison
Boule - Filankevitra Grika tranainy
Fampidiran-tsokajy ho an'ny programa mifantoka amin'ny tetikasa
Petera mandà ny fahafantarany an'i Jesôsy - famintinana tantara ao amin'ny Baiboly
Niantso ny Apôstôly Roambinifolo i Jesoa (Marka 3: 13-19)
Abraham Lincoln: Fakan-tsary sy Fomba Fiteny Fohy
Rahoviana ny hampiasa ny rongony sy ny tongony amin'ny teny alemà
Ahoana ny fampiasana konstante amin'ny Java
Fomba 10 ny mpampianatra dia afaka manampy amin'ny fisorohana ny herisetra any an-tsekoly
St. Olaf College GPA, SAT sy ACT Data
Anjely iray mandroaka an'i Saint Teresa ao afovoan'i Avila amin'ny afon'ny fitiavan'Andriamanitra
Ny anjara asan'ny cytoplasm amin'ny sela
Iza moa i Bartholomeo, apostoly?
Nanasitrana lehilahy niaraka tamin'ny fanahy tsy mety maty i Epilepsy (Marka 9: 14-29)
Ny fiheverana toy ny fiara mialoha ny fiara efa nokarakarain'ny Toyota
Mifidiana amin'ity andro izay hotompoinao ity - Josoa 24:15
Ny Filôzôfia momba ny firaisana ara-nofo sy ny lahy
Aiza no misy ny Teny hoe "rivo-doza"?
Mividy Fitsinjaram-pahefana Mahasalama Mibaribary kokoa noho ny fidiram-bola hetra?
Ny Dinosaurs sy ny biby fahiny tany Montana